विवाह लगत्तै रमेश प्रसाई र नन्दा टिकटकमा रम्दै, हाल्ने बितिक्कै भिडियो भाईरल, लाखौंले हेरे ! हेर्नुहोस् (भिडियो सहित) – SUDUR MEDIA
December 15, 2020 December 19, 2020 AdminLeaveaComment on विवाह लगत्तै रमेश प्रसाई र नन्दा टिकटकमा रम्दै, हाल्ने बितिक्कै भिडियो भाईरल, लाखौंले हेरे ! हेर्नुहोस् (भिडियो सहित)
प्रखर वक्ता रमेश प्रसाईं र समाजसेवी नन्दा सिंहको विवा’ह पछिल्लो समय निकै नै चर्चामा बनेको थियो र अहिले पनि बनिरहेको छ । रमेशले नन्दा सिंह’संग तीन वर्षदेखि प्रेम रहेको र विवाह गर्न लागेको घोषणा गरेका थिए । उनको घोषणा पछि केही फ्यान’हरु रिसाएका समेत थिए । उनी’हरुले कल्पनालाई रमेशले धो’का दिएको आ’रोप समेत लगाएका थिए ।
तर अहिके उनेहरुको जोडीलाई धेरै नेपालीहरुले रुचाएका छन । विवाह भएको हप्तादिन नबित्दै रमेश र नन्दाको टिकटक भिडियो पनि सार्वजनिक भएको छ । उक्त भिडि’योलाई दर्शक:हरुले निकै नै रुचा’एका छ्न । उक्त भिडियो अहिले टिकटकभरी भाइ:रल भ:इरहेको छ । य भिडियोलाई अहिले लाखौं ले हेरिसकेका छन ।
काठमाडौमा रहेका रमेश विवाहका लागि आफ्नो गृहजिल्ला सुनसरीमा (धरान) पुगेका थिए । उनले इटहरीमै नन्दालाई बेहुली बनाएका हुन् । उनीहरुको विवाहमा इन्द्रणी कार्य’क्रमको टिम र केही युट्युवर पत्रकारहरु समेत सह’भागी भएका छन् । त्यसका लागि इन्द्रेणी टिम दुई दिन अघि नै धरान पुगेको थियो ।
नन्दा सिंह कर्णाली’को कालिकोटमा जन्मिएकी हुन् । उनको बाल्यकाल पनि कालि’कोटमा नै बित्यो । नेपालगन्जको दृष्टिविहीनलाई पढाउने होस्टे’लमा बसेर पढेकी नन्दाले त्यही’बाट एस:एलसी उतिर्ण गरिन् । अहिले उनले ब्या:चुलर सकेकी छिन । भिडियो हेर्न यहा क्लिक गर्नुहोस
गायिका ज्योती मगरले कलाकारिताबाटै काठमाडौंमा ठड्याइन् यत्ती ठुलो महल, त्यहाँ पुग्दा खुल्यो धेरै कुरा ! हेर्नुहोस् (भिडियो सहित)